ओली–प्रचण्डबीचको छलफल सम्पन्न, के निस्कियो त निष्कर्ष ? « Sansar News
ओली–प्रचण्डबीचको छलफल सम्पन्न, के निस्कियो त निष्कर्ष ?
२३ असार २०७७, मंगलवार १५:००
२३ असार, काठमाण्डौं । पार्टी विवाद समाधानको लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको ‘वान टु वान’ वार्ता सकिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै ३ घण्टादेखि चलेको वान टु वान वार्ता सकिएको हो ।
नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार मंगलबारको वान टु वान वार्ता सकारात्मक रहेपनि ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन् । जनाइएअनुसार सहमतीय बिन्दु खोज्न पुनः छलफल हुन सक्नेछन् । यसअघि आइतबार र सोमबार पनि अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको थियो ।
स्थायी समिति बैठकका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी भएसँगै नेकपाभित्र विवाद चुलिएको हो । दुई तिहाई स्थायी समिति सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै पदबाट राजीनामा दिन नसक्ने बताईरहेका छन् ।
ओली–प्रचण्ड वार्ता आज पनि, के निष्कर्ष निस्किएला त ?